मुलुक संघीय ढाँचामा जान्छ भन्नेमा धेरैलाई ठूलै शंका थियो, तर जब प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भयो, विस्तारै शंकाको बादल फाट्दै गयो। ठूलै चर्चा र परिचर्चाका बीच प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए। तिनै
मुलुक अनेक राजनीतिक कालखण्ड पार गर्दै अहिले संघीय ढाँचामा प्रवेश गर्दै छ। सक्रिय शाहकाल, राणाकाल, प्रजातन्त्र, बहुदल, फेरि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै मुलुक अहिलेको अवस्थामा आएको हो। वर्षौंसम्मको बलियो जगमा
निकै लामो रस्साकसीका बीच सरकारले बुधबार प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको छ। तर ठूलै असन्तुष्टी जनाउँदै मुलुकका धेरै स्थानमा आन्दोलन भइरहेको छ। दाङका सांसद एवं पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महराले
चुनावको समयमा खर्च नगर्ने नेता त के नेता ? खर्च नगर्नेहरू त नेताको परिभाषाभित्रै अटाउँदैनन्। त्यसैले त अस्ति मंसिरको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा खर्च गर्ने नेताहरूको ठूलै प्रतिस्पर्धा थियो। ‘पैसाको
मान्छेका इच्छा पनि हजारौं हुन्छन् भन्या। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैं आफू सानो छँदा यसो गाउँका साथीहरू माघे संक्रान्तिको मेला भर्न गएको देख्दा सुटुक्क भागेर लुखुरलुखुर बबी चप्पल पड्काउँदै गइन्थ्यो।
सांसद, मन्त्री वा सोभन्दा माथिल्लो पद र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दा माननीय र सम्माननीय शब्दले खुब पुकारिन्छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा त झनै धेरै पटक यस्ता शब्द दोहोर्याइन्छ। लाग्छ कि उनीहरू
मन चोर्नेहरू तपाईंको शहरबस्तीमा धेरै होलान्। सुन–चाँदी, गरगहना, पैसा र अन्य कुनै बहुमूल्य वस्तु चोर्ने र लुट्नेहरूको संख्या पनि धेरै छ। चोर्नका लागि चोरले चासो दिएपछि यस्ता कुरा चोरी हुनु
चार जात छत्तिस वर्णको फूलबारी कहलिएको मुलुक वर्षैभरि मनाइने चाडवाडमा पनि उत्तिनै सम्पन्न छ। एक हप्ताअघि कुनै जात र समुदायको चाडपर्व पर्यो भने अर्को साता अर्को समुदायको पर्व वा चाड
वर्तमान सरकारको मुख्य साझेदार दल माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूले शुक्रवार सामुहिक राजिनाम गरेका छन्। काम चलाऊ भएको करिव ३ महिनापछि सरकारबाट मन्त्रीहरू हटेका हुन्। ढिलै भएपनि माओवादी मन्त्रीहरूले ‘बहादुरी’
विचार गरौं है !
प्रायः काठमाडौं र आसपासका गतिविधि नजिकबाट नियाल्ने धरहरा बिहीबार भने मध्य तराईतर्फ मोडियो। बाराको पचरौता नगरपालिकाका पदाधिकारीको गतिविधि र माग केही भिन्न देखिएपछि त्यहाँ धरहराले चासो नदिने कुरै भएन। सो
सप्तरीका बाढीपीडित तथा भोजपुर र तेह्रथुमका अग्निपीडितले सहुलियतमा कर्जा पाउने भएका छन्। भोजपुर बजार र तेह्रथुमको संक्रान्तिमा भएको आगलागीबाट क्षति भएका ३४ परिवारले शहरी क्षेत्रमा अधिकतम् २५ लाख र अन्य